Yakavanzika Dziviriro - Cannabis Gweta - Tom Howard - Mutemo Firm yeMarijuana & Hemp Bhizinesi
Yedu webhusaiti kero ndeye: https://www.cannabisindustrylawyer.com.
Kana iwe uine i-akhawunti uye iwe ungopinda kune ino yepaiti, tichaisa cookie yenguva pfupi kuziva kana browser yako inogamuchira makiki. Ichi coo haina ine dunhu rega uye inorasirwa paunopfiga browser yako.
Paunopinda mauri, tichagadzirawo makiki akawanda kuti uchengetedze ruzivo rwako rwekupinda uye chekuratidza mavara. Kuvhara ma cookie kunotora mazuva maviri, uye chinyorwa chekusekesa majiki anowanikwa kwegore. Kana ukasarudza "Yeuka Me", kuiswa kwako kucharamba kwevhiki mbiri. Kana iwe uchibuda panhoroondo yako, kuvhara kwekiki kuchabviswa.
Mashoko ako ekukurukura
Nzira yatinodzivirira nayo data yako
Ndezvipi zvinopesana nedzimwe nzira yatinayo munzvimbo
Ndezvipi zvitatu zvatinowana deta kubva
Chii chinogadzirisa kuita zvisarudzo uye / kana kufungidzira kwatinoita nemudhi data
Makambani anoronga kuzivisa zvinodiwa